DEG-DEG: Mid Kamida Xiddigaha Barcelona Oo Laga Helay Caabuqa Korona & Haddii Uu Saamaynayo Kulanka Jimcaha Ee Bayern Munich - Gool24.Net
DEG-DEG: Mid Kamida Xiddigaha Barcelona Oo Laga Helay Caabuqa Korona & Haddii Uu Saamaynayo Kulanka Jimcaha Ee Bayern Munich
Kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa ku dhawaaqday inuu kooxdeeda saameeyay xanuunka saf-marka ku noqday dunida sanadkan isla markaana laga soo helayay ciyaaryahanada kala duwan ee kubadda cagta badhkood.
Barcelona ayaa sheegtay in kaddib baadhitaano caafimaad oo Salaasadii lagu sameeyay sagaal kamida xiddigaha kooxdeeda ee bilaabayay isku diyaarinta xilli ciyaareedka dambe mid kamid ah lagaga helay xanuunka.
Barca ayaa sheegtay in xiddigaha baadhitaanka lagu sameeyay midkooda xanuunka laga helay uu wanaag dareemayo, uusan lahayn wax calaamado ah sidoo kalena lagu karantiimay gurigiisa.
Sidoo kale Barca ayaa sheegtay in dhammaan shaqsiyaadkii la macaamilay ciyaaryahanka aan magaciisa la xusin ee xanuunka laga helay si gaar ah loo xakameeyay isla markaana iyaga baadhitaano kale lagu samayn doono.
Ciyaaryahanka xanuunka laga helay ayay Barcelona xaqiijisay inuusan wax macaamil ah la samayn dhammaan xiddigaha safka koowaad ee kooxda.
Warkaas ayaa ka dhigan in ciyaaryahanada kooxda koowaad ee Barcelona uusan saamayn ku yeelan doonin in xiddig kooxdooda ah laga helay xanuunka isla markaana ay Bayern Munich Jimcaha la ciyaari doonaan kulankoodii Champions League.
Si kastaba ha ahaatee, xiddiga caabuqa laga helay ayaa noqon kara mid kamida xiddigaha kooxda amaahda uga soo laabtay amaba kuwa ay la wareegtay ee aan xilli ciyaareedka inta ka hadhsan u ciyaari karin sidaas darteedna isku diyaarinta xilli ciyaareedka dambe sii bilaabayay.